Sir Ba 's Note ဆြာဘရဲ့မှတ်စု: July 2007
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးတောင်မှ ရေတွေပြည့်နေပြီ ....
၀ါဆိုဝါခေါင် ရေဖောင်ဖောင်ပေါ့ဗျာ .....
ရေတွေက နောက်ထပ်တစ်ပေလောက်တက်ခဲ့ရင် လမ်းပေါ်ကိုရောက်ပြီ .......
တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရေတွေ ၀င်နေလို့ လမ်းဘေးကို တဲထိုးပြီး နေကြရပါပြီ .......
နှစ်စဉ်ဒီလိုပဲ ... ရေ၀င်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ နေတဲ့သူတွေက လမ်းဘေးမှာ နှစ်လ သုံးလလောက်ကို တဲထိုးပြီး နေရတာပါ .........
မှတ်စု sayaba at 9:01 AM No comments:
မှတ်စု sayaba at 8:59 AM No comments:
ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းသင်တန်း တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးတာပါ .......
အလားတူသင်တန်းမျိုးတွေအများကြီးပါ .... ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူတွေသင်တဲ့သင်တန်း၊ ဂရပ်ဖစ်ရေးဆွဲနေသူတွေသင်တဲ့ သင်တန်းအစရှိသဖြင့် သင်တန်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ........
အဲဒီထဲက အများနဲ့ မတူပဲ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးခေါ်တွေနဲ့ သင်ကြားနေတဲ့ သင်တန်းလေးတစ်ခုကို ညွန်းပါရစေ ......
Compu-Care Computer Centre မှာ ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်သင်တန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ........
သင်တန်းမှာ လက်တွေ့ကို ဦးစားပေးပြီး သင်ပါတယ် ......
လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာလည်း အမြဲ တမ်း update ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါ .....
တစ်ဦးချင်း စနစ်တကျ သင်ပေးပါတယ် .......
စိတ်ရှည်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ သင်ကြပါတယ် ........
ဓာတ်ပုံနဲ့ ဆက်စပ်မှုအပြည့်အ၀ရှိတဲ့ ဆရာကိုယ်တိုင် ဦးစီးသင်ပေးနေတာပါ ......
နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံဆုတွေ၊ ပြည်တွင်းဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲဆုတွေ များစွာရရှိထားသူ
နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ(International Advanced Diploma in Computer Studies)ရရှိထားသူ
ဓာတ်ပုံပညာဖြင့် စီးပွားရှာနေသော ဓာတ်ပုံဆရာ
မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းမှာ ဓာတ်ပုံပညာ (Digital Darkroom Technique) သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာ
အဲဒီလို ဆရာက ကိုယ်တိုင်ဦးစီးသင်ပေးနေတာပါ .....
မန္တလေးက နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံဆရာ မောင်မောင်လှတင့်၊ ရွှေသွေး(ဘောဂဗလ)၊ ကိုကိုဆန်နီ အစရှိသူတွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ယမင်းသူဇာ၊ ကိုနီကာ၊ အလှဘဏ်အစရှိတဲ့ ဆိုင်တွေက ၀န်ထမ်းတွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ....................
သင်တန်းဆင်းအတော်များများဟာလည်း ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာ အလုပ်တွေ လုပ်နေကြပါပြီ ....
ကိုယ်ပိုင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေလည်း ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေကြပါပြီ ......
အဲဒီသင်တန်းလေးကို စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က လိပ်စာမှာ စုံးစမ်းတက်ရောက်နိုင်ပါပြီဗျာ ....
Compu-Care Computer Centre
အမှတ်(၂၂၈)၊ ၃၄-လမ်း၊ ၈၅x၈၆ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
မှတ်စု sayaba at 7:24 AM2comments:
မန္တလေး မဟာမုနိဘုရားကြီး (၇၉)ကြိမ်မြောက် ၀ါဆိုခြင်းအလှခတ်ပွဲတော်ကြီးကို ၂၀-၆-၂၀၀၇ ရက်နေ့ ကနေ ၃၀-၇-၂၀၀၇ ရက်နေ့ထိ ရက်ပေါင်း (၄၁)ရက်ကြာ ခတ်ကစားခဲ့ကြပါတယ် ......
မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားက ခြင်းအသင်းစုစုပေါင်း ၁၀၆၆ သင်း ပါဝင် ခတ်ကစားတာ ဖြစ်ပါတယ် ....
ခြင်းအသင်းများဟာ တစ်သင်းကို (၁၂၀၀)ကျပ် ပေးလှူခတ်ကစားရတာဖြစ်ပါတယ် ....
ရရှိတဲ့ အလှူငွေများကို ဘုရားကြီးမှာ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ကြပါတယ် ....
ခြင်းဝါသနာရှင်များက မိမိရဲ့ ပညာနဲ့ ဘုရားကြီးမှာ ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ် .....
၀ါဆိုလပြည့်နေ့မှာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကို ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ် ......
နိုင်ငံခြားသား ခြင်းဝါသနာရှင်များလည်း ပါဝင်ခတ်ကစားကြတာကို တွေ့ရပါတယ် .....
ယခုလက်ရှိ ခတ်ကစားနေတဲ့ နေရာအနီးက ရွှင်ပျော်ပျော် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနားမှာ လာရောက်ခတ်ကစားခဲ့တဲ့ ခြင်းဝါသနာရှင် ငါးဦးမှ စတင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ..........
စတင်ခတ်ကစားစဉ်က ငါးပြား၊ ဆယ်ပြား စုပြီး လှူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ..........
အသက်(၈၀)ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခြင်းဝါသနာရှင်ကြီး ဦးမြဟန်ရဲ့ ခတ်ကစားဟန်
မှတ်စု sayaba at 6:42 PM No comments:
တကယ် စားလို့ကောင်းတဲ့ အရာတွေပါ ....
စားကောင်းလို့လည်း ဒီလို အဆိုလေး ပေါ်ထွက်လာတာပေါ့ဗျာ ....
လက်ဖက်ဆိုလို့ မန္တလေးမှာ လက်ဖက်ကောင်းကောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ် ....
အဲဒီအထဲက တစ်ခေတ်တစ်ခါကထဲက ပွဲတော်တည် လက်ဖက်ဆိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၀င်းသန်း-လက်ဖက်ဆိုင်ဟာလည်း တစ်ဆိုင်ပါပဲ .......
ထူးခြား ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ ဆက်လက်ချီတက်နေတဲ့ ၀င်းသန်း-လက်ဖက်ဆိုင်ဟာ ၈၅လမ်း၊ ၂၉x၃၀ လမ်းကြားမှာ တည်ရှိပါတယ် .......
သန့်ရှင်းခြင်း၊ အရသာကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်ခြင်းနဲ့အတူ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လုပ် ရောင်းချပေးနေတာပါ ......
မင်္ဂလာဆောင်၊ အလှူတွေမှာလည်း ၀င်းသန်း-လက်ဖက်က သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ၀န်ဆောင်မှုများနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါတယ် ......
ဧည့်ခံပွဲတွေအတွက် တာဝန်ယူဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာ တစ်ပွဲချင်းစီအပေါ်မှာ တွက်ချက်ယူတာမဟုတ်ပဲ လက်ဖက်အချိ်န်၊ ပဲအချိန်တွေနဲ့ပဲ တွက်ချက်ပေးတာမို့ ကာယကံရှင်တွေအနေနဲ့ အလေအလွင့်မရှိပဲ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေပါတယ် .....
လက်ဖက် အညွန့်၊ ရိုးရိုးလက်ဖက်၊ လက်ဖက်နှပ်၊ ချဉ်စပ် အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်သလိုပဲ ဂျင်း၊ ပဲကြီး၊ ပဲပူး၊ ပဲရေပွ၊ ပဲကြီးလှော်၊ ပဲကြားလှော်၊ ပဲစဥ၊ ဆားလှော်ဆိုပြီး လက်ဖက်၊ ဂျင်းနဲ့ တွဲဖက်တဲ့ အစာပလာတွေကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ် .........
တကယ်ကို စားကောင်းလို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ် .......
မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ..........
မှတ်စု sayaba at 10:27 PM No comments:
ဒေါ်တင်ရည် (အထက-၁၆) အသက်-၆၀ နှစ်
နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုဇော်လတ်ရဲ့ မွေးသမိခင်
မှတ်စု sayaba at 7:26 AM 1 comment:
၂၂-၇-၂၀၀၇ နေ့(၁)နာရီမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ service + က မရတနာချိုရဲ့ Everything is Bloggable ဟောပြောပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ ...... စာနယ်ဆရာများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ပလော့ဂါများနဲ့ စည်ကားပါတယ် .... အခန်းပြည့်လျှံသွားပြီး နားမထောင်ပဲ ပြန်သွားရတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ .....
အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ကိုဇော်မိုးအောင်ကဆောင်ရွက်ပါတယ် ....
ကိုကျော်ကျော် (AAT) က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးပါတယ် ...
သြဂုတ်(၃၁)ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် ပလော့ဂါနေ့ကျရင် ပြန်ဆုံချင်ပါသေးတယ် .........
ဒီနေ့မနက် ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူကြတယ် ......
ခန်းမတိုင်းလိုလိုမှာ မင်္ဂလာဆောင်တွေ တွေ့ရတယ် ...... (၀ါဝင်အမှီမင်္ဂလာဆောင်ကြလေရဲ့)
နေ့လယ်က ပလော့ဂါတွေဆုံဖြစ်တယ် ..........
မှတ်စု sayaba at 5:27 PM No comments:
မနက်က မနက်စာစားရင်း ဈေးဝယ်တဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခါမှ ဈေးမ၀ယ်ဖူးတော့ သူတို့ပြောတာကိုပဲ နားထောင်နေလိုက်တယ်။
အဲဒီထဲမှာ ၀က်သားကို ခိုးဝယ်ရတယ်လို့ကြားမိလို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
၀က်သားကို အခွန်ဆောင်ပြီးမှရောင်းခွင့်ရတော့ ဈေးကြီးတွေမှာပဲ ရောင်းတာတဲ့ဗျာ။
အခွန်လွတ်ဈေး လို့ အမည်ခံထားတဲ့ ဈေးမှာ အခွန်ဆောင်ပြီးမှ ရောင်းရမှာတဲ့လားဗျာ။
အခွန်လွတ်ဈေး ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာ။
မှတ်စု sayaba at 9:30 AM No comments:
မန္တလေးရုံးစိုက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှာ မန္တလေးဓာတ်ပုံဆရာများရဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲလေးတစ်ခုကို (၁၈-၇-၂၀၀ရ) ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်နဲ့ ကောင်စစ်ဝန်များအတွက် သီးသန့် ပြုလုပ်ပေးတာလို့ သိရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာများလည်း စုံစုံညီညီ တက်ရောက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
(copyright ဆိုတာကိုတော့ ခပ်မေ့မေ့)
မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်း နာယက ဦးထွန်းမြင့်က ရှင်းလင်းပြစဉ်
ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ကြီး စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ရှု
မှတ်စု sayaba at 9:57 PM 1 comment:
(18-7-2007)နေ့က AAT မှာ စာရေးဆရာ ညီစေမင်း ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး ဟောပြောပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းအတွေ့အကြုံ၊ အင်တာဗျူးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကို အကျယ်တ၀င့် ဟောပြော ပို့ချသွားပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများနဲ့ လေ့လာသူများတက်ရောက်ကြပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းသင်တန်းရဲ့ အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ စာနယ်ဇင်းထဲက ထင်ရှားတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဟောပြောပွဲပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းသင်တန်းသားများသာမက စာပေမြတ်နိုးသူများပါ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာ ကိုရိုးကွန့်ရဲ့ စေတနာတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သင့်တင့်သော သင်တန်းကြေးကိုသာ ယူပြီး စာနယ်ဇင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ဆရာကိုရိုးကွန့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စု sayaba at 9:39 PM No comments:
General Aung San (Bogyoke Aung San in Burmese) (Burmese: ; MLCTS: buil hkyup aung hcan:; IPA: [bòʊdʒoʊʔ àʊn sʰán]); February 13, 1915 – July 19, 1947) was Burma's national hero, revolutionary, nationalist, general, and politician.
He was born to U Pha,alawyer, and his wife Daw Su at Natmauk, Magwe district, in central Burma, then part of British India. His family was already known in the resistance movement, his great uncle Bo Min Yaung having fought the British annexation in 1886.
He continued his education, after attending schools at Natmauk and Yenangyaung, at Rangoon University, receivingaBachelor of Arts degree in English Literature, Modern History, and Political Science. Soon, he was elected to the executive committee of the Rangoon University Students' Union (RUSU). He then became editor of their magazine Owei (Peacock's Call).
In October 1938, Aung San moved from student politics to nationalist politics. At this point, he was anti-British, and staunchly anti-imperialist. He becameaThakin (lord or master—a politically motivated title that proclaimed that the Burmese people were the true masters of their country, not the colonial rulers who had usurped the title for their exclusive use) when he joined the Dobama Asiayone (We Burmans Association) formed in May 1930, and acted as their general secretary until August 1940. While in this role, he helped organizeaseries of countrywide strikes that became known as Htaung thoun ya byei ayeidawbon (the '1300 Revolution', named after the Burmese calendar year). He also helped found another nationalist organization, Bama-htwet-yat Gaing (the Freedom Bloc), by forming an alliance between the Dobama, the ABSU, politically active monks and Dr Ba Maw's Sinyètha (Poor Man's) Party, and became its general secretary. What remains relatively unknown is the fact that he also becameafounding member and first secretary-general of the Communist Party of Burma (CPB) in August 1939. Shortly afterwards he co-founded the People's Revolutionary Party, renamed the Socialist Party after the Second World War. In March 1940, he attended the Indian National Congress Assembly in Ramgarh, India. However, the government issuedawarrant for his arrest due to Thakin attempts to organizearevolt against the British, and he had to flee Burma. He went first to China, seeking assistance from the communist Chinese, but he was intercepted by the Japanese military occupiers in Amoy, and was convinced by them to go to Japan instead.
In February, 1941, Aung San returned to Burma, with an offer of arms and financial support from the Fumimaro Konoe government. He returned briefly to Japan to receive military training, along with the first batch of the Thirty Comrades. In December, with the help of the Minami Kikan,asecret intelligence unit formed to close the Burma Road and to supportanational uprising and headed by Colonel Suzuki, he founded the Burma Independence Army (BIA) in Bangkok, Thailand (under Japanese occupation at the time). He became chief of staff, and took on the rank of Major-General.
The capital of Burma, Rangoon, fell to the Japanese in March 1942 (as part of the Burma Campaign in World War II), and the Japanese military administration took over the country. In July, Aung San re-organised the BIA as the Burma Defence Army (BDA). He remained its commander in chief—this time as Colonel Aung San. In March 1943, he was once again promoted to the rank of Major-General. Soon afterwards, he was invited to Japan, and was presented with the Order of the Rising Sun by the Emperor.
On August 1, 1943, the Japanese declared Burma to be an independent nation. Aung San was appointed War Minister, and his army was again renamed, this time as the Burma National Army (BNA). His cooperation with the Japanese authorities was to be short-lived: Aung San became sceptical of their promises of true independence and was displeased with their treatment of the Burmese people. He made secret plans to drive the Japanese out of Burma and made contact with the British authorities in India, with the help of Communist leaders Thakin Than Tun and Thakin Soe who had anticipated and warned the independence movement of the more urgent threat of fascism before the Japanese invasion. On March 27, 1945 he led the BNA inarevolt against the Japanese occupiers and helped the Allies defeat the Japanese. March 27 came to be commemorated as 'Resistance Day' until the military regime later renamed it 'Tatmadaw (Armed Forces) Day'.
After the return of the British who had establishedamilitary administration, the Anti-Fascist Organisation (AFO), formed in August 1944, was transformed intoaunited front, comprising the BNA, the Communists and the Socialists, and renamed the Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL). The Burma National Army was renamed the Patriotic Burmese Forces (PBF), and then gradually disarmed by the British as the Japanese were driven out of various parts of the country. The Patriotic Burmese Forces, while disbanded, were offered positions in the Burma Army under British command according to the Kandy conference agreement with Lord Mountbatten in Ceylon in September 1945. Some of the veterans had been formed into the Pyithu yèbaw tat (People's Volunteer Organisation or PVO) under Aung San,aparamilitary force in uniform and openly drilling in public, which may have overcome the initial reluctance on the part of the British authorities. Aung San was offered the rank of Deputy Inspector General of the Burma Army, but he declined it in favor of becomingacivilian political leader.
Aung San was to all intents and purposes Prime Minister, although he was still subject toaBritish veto. On January 27, 1947, Aung San and the British Prime Minister Clement Attlee signed an agreement in London guaranteeing Burma's independence withinayear - he had been responsible for its negotiation. During the stopover in Delhi atapress conference, he stated that the Burmese wanted 'complete independence' not dominion status and that they had 'no inhibitions of any kind' about 'contemplatingaviolent or non-violent struggle or both' in order to achieve this, and concluded that he hoped for the best but he was prepared for the worst. He is also believed to have been responsible, in part, for the persecution of the Karen people, based on their loyalty to the British and having fought the Japanese and the BIA. Dorman-Smith had in fact rejectedarequest for an AFPFL delegation to visit London and tried to bring Aung San to trial for his role in the execution ofavillage headman during the war.
Only months before independence, on July 19, 1947, Aung San and six of his newly formed cabinet members including his older brother Ba Win were assassinated duringacabinet meeting. The assassination was supposedly carried out on the orders of U Saw,arival politician; but there are aspects of U Saw's trial that give rise to doubt. Burma regained its independence on January 4, 1948.
While he was Minister of Defence in 1942, Aung San met and married Khin Kyi, and around the same time her sister met and married Thakin Than Tun, the communist leader. Aung San's daughter, Aung San Suu Kyi, isaNobel Peace Prize laureate and leader of the Burmese pro-democracy party, the National League for Democracy, which is opposed to the current military regime. One of his sons, Aung San Lin, died at age eight, when he drowned in an ornamental lake in the grounds of the house. Another son, Aung San Oo, is an engineer working in the United States and opposed to his sister's political activities. Aung San's wife, Khin Kyi, the mother of his children, died on December 27, 1988.
Aung San's legacy providedareference point for Burmese governments until the military regime in the 1990s tried to eradicate signs of Aung San's memory. Nevertheless, several statues of him adorn the capital, and his picture still has pride of place in many homes and offices throughout the country. Scott Market, Yangon's most famous, was renamed Bogyoke Market in his memory, and Commissioner Road was retitled Bogyoke Aung San Road after independence. These names have been retained. Many towns and cities in Burma have thoroughfares and parks named after him. His portrait was held up everywhere during the 8888 Uprising and used asarallying point.. Following the 8888 Uprising, the government redesigned the national currency, the kyat, removing his picture and replacing it with scenes of Burmese life. He was only 32 when he died;amartyrs' mausoleum was built at the foot of the Shwedagon Pagoda, and 19 July was designated Martyr's Day (Azani nei). His place in history as the Father of Burmese Independence andanational hero continues to the present day both due to his own legacy and due to the activities of his daughter.
^ab cdefg h i Aung San Suu Kyi (1984). Aung San of Burma. Edinburgh: Kiscadale 1991, 1,10,14,17,20,22,26,27,41,44.
^ab cdefg h i j k l m n o p q r Martin Smith (1991). Burma - Insurgency and the Politics of Ethnicity. London and New Jersey: Zed Books, 90,54,56,57,58,59,60,65,69,66,68,62-63,65,77,78,6.
^ The Panglong Agreement, 1947. Online Burma/Myanmar Library.
^ Who Killed Aung San? - an interview with Gen. Kyaw Zaw. The Irrawaddy (August 1997). Retrieved on 2006-10-29.
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San"
မှတ်စု sayaba at 6:34 AM No comments:
စာရေးဆရာ ညီစေမင်း ဟောပြောမည်
ဒီနေ့(၁၈-၇-၂၀၀၇) နေ့လယ်(၁၁)နာရီ AAT Computer Centre မှာ စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းပညာသင်တန်းသားများနဲ့ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူ မည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်တဲ့ ဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုပါ။
စာရေးဆရာ ညီစေမင်းက ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ် ။
မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းက ကြီးမှူးပြီး “ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့” ကျင်းပဖို့အတွက် ၁၅-၇-၂၀၀၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက အသင်းရုံးခန်းမှာ စည်းဝေးတိုင်ပင်ကြပါတယ်။ အသင်းနာယက ဦးထွန်းမြင့်၊ ဦးမောင်မောင်လတ်(ချစ်ညို)၊ ဥက္ကဌ ဦးကျော်အောင်(ပေါက်ခေါင်း)၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ အသင်းသားများနှင့် စာနယ်ဇင်းဆရာများတက်ရောက်ပါတယ်။
နာယက ဦးထွန်းမြင့်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်
ဥက္ကဌ ဦးကျော်အောင် (ပေါက်ခေါင်း) မှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်
ဒုဥက္ကဌ ဦးသိန်းဌေးမောင်(ဆွေလှသိန်း) မှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်
သြဂုတ်(၁၉)ရက်နေ့ဟာ ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ လို့နိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ၁၈၃၉-ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၉)ရက်နေ့မှာ ဓာတ်ပုံပညာ PHOTOGRAPHY ရယ်လို့ အများပြည်သူကို ချပြခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ။ ကမ္ဘာကိုကြေငြာခဲ့တဲ့ အဲဒီနေ့ကို ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ လို့သတ်မှတ်ပြီး အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပနေတာ ဆယ်စုနှစ်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ကို မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းက ပထမအကြိမ်အဖြစ် စတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့မှာ အသက်(၆၀)အထက် ဓာတ်ပုံပညာရှင်ကြီးများကို ဂုဏ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာများ မိတ်ဆုံစားပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ အသင်းမ၀င်သည်ဖြစ်စေ ဓာတ်ပုံဆရာမည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းက ဖြစ်မြောက်ရေး ဆပ်ကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
၁။ ဦးအောင်မြင့် (မဉ္ဇူသင်း) ဥက္ကဌ
၂။ ဦးဇော်လင်း (စကော်ပီယံ) ဒု-ဥက္ကဌ
၃။ ဦးဘဦး (မန္တလေး) အတွင်းရေးမှူး
၄။ ဦးသက်နိုင် တွဲဖက်- အတွင်းရေးမှူး
၅။ ဦးထွန်းထွန်းဦး ဘဏ္ဍာရေးမှူး
၆။ ဦးအောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး) သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး
၇။ ဦးနန္ဒာမင်းလွင် သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး
၈။ ဦးအောင်မြင့်မြတ် (စစ်ကိုင်း) သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး
၉။ ဦးကျော်ထူး (စစ်ကိုင်း) သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး
၁၀။ ဦးငြိမ်းချမ်းစိမ်းလန်း အဖွဲ့ဝင်
၁၁။ ဦးဇော်မြင့်ဦး (စမ်းနန္ဒာ) အဖွဲ့ဝင်
၁၂။ ဒေါက်တာစန်းနိုင် အဖွဲ့ဝင်
၁၃။ ဦးဌေးလွင် (နှင်းဝတ်ရည်) အဖွဲ့ဝင်
၁၄။ ဦးအောင်ဇော်ဝင်း (ရွှေလောင်းသား) အဖွဲ့ဝင်
၁၅။ ဦးအောင်ကျော်ဝင်း (မဉ္ဇူသင်း) အဖွဲ့ဝင်
၁၆။ ဦးပေတိုး အဖွဲ့ဝင်
၁၇။ ဦးဂဲကြီး အဖွဲ့ဝင်
၁၈။ ဦးမျိုးသန့် (မြိုင်) အဖွဲ့ဝင်
၁၉။ ဦးဇော်လတ် အဖွဲ့ဝင်
၂၀။ ဦးညီညီမောင် (လျပ်စစ်) အဖွဲ့ဝင်
၂၁။ ဦးမြင့်သန်း အဖွဲ့ဝင်
၂၂။ ဦးအောင်ကျော်ဌေး စည်းရုံးရေးမှူး
ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အလှူငွေများလည်း ဓာတ်ပုံပညာချစ်သော မည်သူမဆို မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းတိုက်မှာ ထည့်ဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
22-7-2007 ရက်နေ့ နေ့(၁)နာရီအချိန်မှာ ရတနာပုံဈေး တတိတယထပ် ရတနာပုံဆိုင်ဘာကော်ပိုရေးရှင်းမှာရှိတဲ့ မန္တလေးတိုင်းကွန်ပျူတာရှင်များအသင်းရုံးခန်းမှာ “ Everything is Bloggable” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မရတနာချို(service +)က ဟောပြောပါမယ် ....... Blog နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများကို လက်တို့လိုက်ပါရစေ ........
မရတနာချိုဆိုတာ http://yadanarcho.blogspot.com/ မှာ ရေးနေတဲ့ Blogger တစ်ယောက်လို့ထင်ပါတယ် .....
မှတ်စု sayaba at 10:50 AM No comments:
“ငါတို့ဆီမှာ တနေကုန်မီးလာနေတာ ၃-ရက်ရှိပြီ”
“ငါတို့ဆီမှာ တနေကုန်မီးလာနေတာ ၅-ရက်ရှိပြီ”
ဒီအသံတွေကို ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကြားကြားနေရပါတယ် ......
ဒီအသံတွေကြားရတိုင်း စိတ်ညစ်ရပါတယ် .........
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ ခွဲတမ်းတောင် ပြည့်အောင်မလာလို့ပါ .......
သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောမယ့် ၆-နာရီလာပြီး ၁၂-နာရီမလာတဲ့စနစ်ကိုတောင် ပြည့်မီအောင်မလာပါဘူး ......
လေ့လာကြည့်မိသလောက် လူကြောင့်လို့ထင်ပါတယ် ........
လျှပ်စစ်မီးဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ယောက် က တစ်ရက်ကို မနက်(၅)နာရီတစ်ကြိမ်၊ နေ့(၁၁)နာရီတစ်ကြိမ်၊ ညနေ(၅)နာရီတစ်ကြိမ်၊ ည(၁၁)နာရီတစ်ကြိမ်.. တစ်ရက်ကို လေးကြိမ် လမ်းထိပ်က ထရန်စဖော်မာကိုလာပြီး မီးလိုင်းတွေ ချိန်းလေ့ရှိပါတယ် .......... ၈၅-လမ်းx၃၄-လမ်းဒေါင့် ကထရန်ထဖော်မာမှာ ဖြစ်ပါတယ် .........
သူတို့တက်သွားပြီးတာနဲ့ နောက်(၁၀)မိနစ်လောက်ဆိုရင် မီးလာမယ်၊ မီးပျက်မယ် ဖြစ်တော့တာပါပဲ ........
၂၄-နာရီမီးတွေတစ်မြို့လုံးလိုလိုလာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လမ်းထိပ်မှာတော့ ဒီအတိုင်းပဲ နေ့စဉ်လုပ်နေဆဲပါ ................
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ် .......
သူကတော့ ကာတွန်းဆရာ အောက်တိုဘာအောင်ကြီး ...........
ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို ခေတ္တရောက်နေခိုက် အေးရိပ်မွန်-အမျိုးသမီးကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းမှာ ၁၃-၇-၂၀၀၇ ညနေ(၄)နာရီက ကလေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ ........
မိဘမဲ့ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းက ကျောင်းသူလေးတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံပြီး ကာတွန်းရေးဆွဲခြင်းအကြောင်းကို ပြောပြတယ် .........
စိတ်ခွန်အားတက်စေမယ့် ဆွေးနွေး ဟောပြောမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ..........
ရခဲ့တဲ့အချိန်(၁)နာရီလောက်အတွင်းမှာ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ် .............